Usephila ngokucela owaseZinketheni | News24
Usephila ngokucela owaseZinketheni
UNkk Gabisile Mhlungu ehleli ngaphandle kwendlu yakhe akhala ngokuthi iyanetha.PHOTO: lethiwe makhanya
ISAGUGA saseZinketheni sithi impilo yaso seyiphenduke usizi lodwa njengoba sesiphila ngokukhangenza komakhelwane kanye nakumalunga omphakathi.
UNkk Gabisile Mhlungu (59) uthi inkinga yakhe yokuhlupheka kade yaqala kodwa isimo siqale ukwedlulela esikhathini esingangonyaka esedlule njengoba alimala umlenze wangasakwazi ngisho ukuhamba efuna amatoho.
Ekhuluma ne-Echo uNkk Mhlungu uthe kwesinye isikhathi kuze kumuphoqe ukuba alale engadlile ngenxa yokuthi kusuke kungekho khona ukudla.
Uthe : “Ngiyaye ngithola ukudla uma kukhona abantu abangizwelile abawomakhelwane bangilethela ukudla noma iphalishi ngikwazi nokuthi ngilale ngidlile.
“Isimo sami sempilo naso asikho kahle njengoba ngiwumuntu odla amaphilisi kodwa kwesinye isikhathi kuze kungiphoqe ukuthi ngingawaphuzi ngoba ngisuke ngingenayo into engizolala ngiyidlile.
“Uma ngibona ukuthi liyashona ilanga ayikho into engizoyidla ngivele ngiziphonse embhedeni ngilale nginjalo,” kubeka yena.
UNkk Mhlungu, ohlala yedwa emzini wakhe oyigumbi elilodwa, akanawo ngisho ugesi njengoba engenawo amandla okuwuthenga. Uthe ngisho indlu lena ahlala kuyona wasizwa ukuthi wakhalelwa abantu ababehamba bebheka abantu abanezindlu ezingekho esimweni kodwa manje inkinga ukuthi nayo iyanetha uma lina izulu. “Uma like lanetha nje ngilala khona kunjalo embhedeni umanzi.
“Uma kubanda futhi kungena umoya ngigodola kuze kuse.
“Ingane yami enginayo nayo yathola indawo yayo yokuhlala khona lapha eZinketheni kodwa futhi ayisebenzi iphila ngokubamba amatoho nawo abuye angabi khona.
“Uma kwenzekile kwakhona ekutholayo iyafika izonginikeza loko okuncane izame ukungithengela nokusampuphu.”
UNkk Mhlungu uthi into ayifisayo nje ukuthi abe nempilo efana neyabanye abantu.
“Angisakwazi ukuqhubeka ngiphile ngale ndlela.
“Njengoba ngibuye ngingawadli amaphilisi ngizogcina sengigula ngingabonwa nawumuntu njengoba ngiwumuntu ozihlalela yedwa.
“Uma nje ngingakwazi ukuthola okuya ngasethunjini ukuze ngizokwazi ukuphuza amaphjlisi zinsuku zonke ngiphinde ngithole ukulungiselwa indlu ngingajabula kakhulu,” kuphetha yena.